(NZ) "ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုသုတေသနပြုလိုသည်။ " လိင်ကုထုံးဆရာ Jo Robertson သည် PIED (2018) - သင့် ဦး နှောက်တွင်порно
(NZ)“ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုသုတေသနပြုလိုသည်။ ” လိင်ကုသသူ Jo Robertson သည် PIED (၂၀၁၈)
ကနျြးမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပို. ပို. အစွန်းရောက်များနှင့်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းနယူးဇီလန်၏ကျန်းမာရေးအပေါ်ရှိကြောင်းသက်ရောက်မှုသို့ပိုပြီးသုတေသနစီစဉ်နေပါတယ်။ (ဆောင်းပါးနှင့်တီဗီအစီရင်ခံစာမှ Link ကို) ။ ဝန်ကြီးဌာနလက်ဝါးကပ်တိုင်အစိုးရမိသားစုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်လက်ဝါးကပ်တိုင်အစိုးရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားများအတွက်သုတေသနအဆိုပြုချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
သြစတြေးလျသုတေသနသားသမီးများ၏ 28 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်အသက် 11 နေဖြင့်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏ 93 ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းကို 62 မှတိုးမြှင့်, အသက် 16 အားဖြင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြကြောင်းပြသထားတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Service ကိုကော်မရှင်ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူး Keriana Brook က porn နယူးဇီလန်တို့ကအသုံးပြုမှုအဖြစ်ကျောင်းတွေ, လူငယ်များနှင့်ကျန်းမာရေးပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့ကိစ္စရပ်များ၏အတိုင်းအတာများနှင့်ငွေပမာဏကိုနားလည်ရန်လိုသည်ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါအလင်းစီမံကိန်းကနေအော့ကလန်အခြေစိုက်သုတေသီ Nikki Denholm ရုံမိဘများ, ကျောင်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး Clinician အပါအဝင်ထက်ပို 500 သက်ဆိုင်သူများဆီက input နှင့်အတူလူငယ်များအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုအပေါ်အချို့သောသုတေသနပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
“ ကျွန်တော်တို့မှာ ၁၀ နှစ်နဲ့ ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးတွေဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမှန်မှန်ကြည့်လေ့ရှိတယ်၊ အရွယ်ရောက်သူများမှာမင်းကိုမဝေဖန်တာတွေမရှိဘဲ၊ ဒါကိုဘယ်လိုဝေဖန်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ကြားပေးရမယ်” ​​ဟုမစ္စ Denholm မှပြောကြားခဲ့သည်။
မစ္စ Denholm ကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာ 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုရောထွေးမက်ဆေ့ခ်ျများဖန်တီးသောလိင်အကြမ်းဖက်ကြောင်းခန့်မှန်းင့်ကပြောသည်။
"လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပီတိနှင့်အပြုအမူကိုပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတူညီခကျြစည်းလုံးန်းကျင်နယ်နိမိတ်မှုန်ဝါးစေရန်, "မစ္စ Denholm ကဆိုသည်။
လိင်ကုထုံး Jo Robertson က porn လုလင်တို့နှင့်အမျိုးသမီးလိင်နှင့်မည်သို့သူတို့ဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရှုမြင်လမ်းကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။
"အတိတ်ကို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်လူပျိုတို့အတွက်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး" လို့သူကဆိုသည်။
"ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမှပထမဦးဆုံးအကြီးတွေမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, ဒီငါ့အသက်ကိုထိခိုက်ကြောင့်အစားများကဲ့သို့အလွန်သေးငယ်တဲ့အမှုအရာ porn စောင့်ကြည့်ဖို့သငျသညျအိမ်မှာတည်းခိုသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူထွက်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါတယ်" ဟုမစ္စ Robertson ကဆိုပါတယ်။